यस्तो क्लब, जहाँ एक पटक हाँसेको ४० रूपैयाँ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यस्तो क्लब, जहाँ एक पटक हाँसेको ४० रूपैयाँ
यस्तो क्लब, जहाँ एक पटक हाँसेको ४० रूपैयाँ
जेठ २५ गते, २०७६ - ११:११
काठमाडौँ । हाँसेको पनि पैसा ? तपाईं अचम्म पर्नुभयो होला हैन ? पैसा तिर्नबाट जोगिन तपाईंले नहाँसेको अभिनय गर्न पनि सक्नुहुन्न, मेसिनले च्याप्प समातिहाल्छ र हाँसोको पैसा तिराउछ । यस्तो अचम्मको क्लब नेपालमा भने खुलिसकेको छैन ।
स्पेनको बार्सिलोनास्थित एक कमेडी क्लबले आफुकहाँ आएका दर्शकहरुबाट उनीहरुको हाँसो अर्थात् उनीहरुले लिएको आनन्दका आधारमा शुल्क लिन शुरू गरेको छ । दर्शक कति हाँसे भन्ने पत्ता लगाउन उक्त कमेडी क्लबले प्रत्येक टेबलमा अनुहारको हाउभाउ चिन्ने प्रविधि९फेसियल रिकग्नीसन टेक्नोलोजी जडान गरेको छ ।
नहाँसेको खण्डमा टिकटको मूल्य तिर्नु नपर्ने भनेर क्लबले घोषणा गरेपछि केही दर्शक जति हाँसो लागेपनि चुप लाग्ने भन्दै भित्र छिरे । तर उनीहरूको अनुहारको हाउभाउ हेर्दा मुस्कुराएको देखेपछि उनीहरूले आनन्द लिएको भन्दै मेसिनले टिकटको शूल्क लगाइदियो ।
उक्त कमेडी क्लबको सिको गर्दै अहिले स्पेनमा आधा दर्जन भन्दा बढी त्यस्तै क्लब खुलिसकेका छन् ।
जेठ २५ गते, २०७६ - ११:११ मा प्रकाशित